Itsha yaseMgungundlovu izocijwa ngomkhakha wezamafilimu – Sivubela intuthuko Newspaper
INTAKA ibekelwe abazolo kubantu abasha besifunda saseMgungundlovu abanothando lomkhakha wezamafilimu njengoba i-Dynamites Youth ngokubambisana noMgungundlovu Film Festival ibahlelele i-workshop yamasonto amathathu lapho bezobe beqeqeshwa khona eminxeni yezamafilimu kungaba ngukubhala, ukushutha nokuqondisa.
UPortia Ndudane onguMqondisi woMgungundlovu Film Festival neDynamites Youth uthe bahlele ukunikeza ithuba abantu basha baseMgungundlovu abaphakathi kweminyaka engu-16 kuya ku-35 ukuba bazothuthukisa ulwazi lwabo kulo mkhakha. “Le workshop esiyihlelile ezoba mhlaka 30 November ize isongwe mhlaka 18 December izobe iseMsunduzi Bessie Head Library. Okusikhuthaza kakhulu ekusondeleni kubantu abasha yingoba sibone ukuthi banentshisekelo yalo mkhakha kodwa ulwazi luncane sabe sesihlela le workshop. Siyathemba ukuthi ulwazi abazoluthola luzobaphilisa njengoba bezofunda nangokonga imali ebhizinisini kanye nokusebenza kwayo. Abanye bayakwazi ukushutha kodwa kabakwazi ukubhala imidlalo sikholwa ngukuthi bazophuma sebenamakhono amaningi futhi sebehlomile ngokukwazi ukuqondisa imidlalo ukuze ubukeke kahle kumbe uzwakale kahle kolalele nobukayo,” kusho uPortia.
Eqhuba uPortia uthe le workshop izobe yenziwa na-online kodwa okunye kuzobuye kwenziwe bukhoma ngaphakathi eBessie Head Library njengokusebenzisa imishini namakhamera. Uthe le ngqayizivele yethuba bahlose ngayo ukucija abathandi bezamafilimu ngamakhono amasha njengoba ezobuchwepheshe zithuthuka nsuku zonke.
Abadinga imininingwane mayelana nokuba yingxenye yale workshop okuthiwa sekuhlelwe konke ngezinto zokuthwala abazobe beyihambele bangathinta uPortia kwi-email ethi: dynamitesyouthkzn@gmail.com noma bamshayele kwethi: 068 591 2765.